Yaa dhugaa eessa jirta ati? - Welcome to bilisummaa
Yaa dhugaa eessa jirta ati?
Suuraa kanarraa maaltu sitti mul’ata? maaltu sitti dhagyama? maal irraa yaadatta? Maal si yaadachiisa?
Previous Qabsoon Oromoo ta’anii seenaa ofii odeessuu qofa taatee dhiiroo..
Next Oromo Held Human Rights Rally at the White House and State Department